Nke kachasị mkpa, ha nwere ike ịdị nfe n 'mgbe ọ bụla na-ejikarị ohere ala. Tebụl ma ọ bụ tebụl akwa nwere ike ịtụle dị ka ụdị nke onwe ha, mana ọ ka nwere njikọ chiri anya na tebụl akụkụ akụkụ, na-eji ụdị ndị yiri ya na nha. Agbanyeghị, a na-a paureụ ndị na-ahụkarị na tebụl bed dị elu bụ otu ma ọ bụ karịa ndị na-adọta onwe ha na-enye ebe nzuzo iji chekwaa obere ihe niile ịchọrọ n'elu akwa gị.
Ekelela afọ nke ọkachamara na teknụzụ dịjitalụ, nke dijitalụ na-ege ntị ugbu a na-ewepụta ahụmịhe ndị na-agbanwe agbanwe na-ewetara ọtụtụ ihe ndị dị iche - ihe ndị a na-eme Ọrụ Dị Mkpa na Architecre. Ihe ndị a na - emekarị na gravel, Sand onxateamong ihe ndị ọzọ, enwere slag.
Ha mechara zuo ike. Ekwentị ụfọdụ ndị na-akparịta ụka banyere ndụ ma na-enye ndị ụwa na-akparịta ụka. Greenwood kpọtụrụ otu n'ime ụmụnne ya; Ọ tụgharịrị na ọkpụkpọ a bụ ihe mgbaàmà kachasị mkpa maka Lafeng. Yvonne Budero bi na mpụga Atlanta. N'ime awa iri atọ na ise, ọ ga-ejikwa ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ndị otu mgbapụta.